Chelsea Iyo Kabtankeeda John Terry Oo Si Wada Jir Ah U Shaaciyay In Terry Uu Stamford Bridge Ka Baxayo Dhamaadka Xili Ciyaareedkan. - Wargane News
Home Sports Chelsea Iyo Kabtankeeda John Terry Oo Si Wada Jir Ah U Shaaciyay...
Kooxda Chelsea iyo kabtankeeda John Terry ayaa si wada jir ah ugu wada dhawaaqay in Terry uu ugu danbayn ka baxayo Stamford Bridge. John Terry oo waayihiisa ciyaareed ku soo qaatay Stamford Bridge isla markaana horseed ka ahaa horumarkii ay Chelsea soo gaadhay ayaa dhamaadkii xili ciyaareedkii hore go’aansaday in uu ka baxo Blues balse imaatinkii Antonio Conte ayaa keenay in uu saxiixo heshiis hal sano ahaa kaas oo dhacaya dhamaadka xili ciyaareedkan.
Laakiin hadda waxaa war rasmi ah soo wada saaray Chelsea iyo kabtankeeda John Terry waxayna ku cadeeyeen in dhamaadka xili ciyaareedkan uu Terry ka dhaqaaqi doono Stamford Bridge. Terry ayaan haddaba qayb ka ahayn shaxda Antonio Conte uu ku maamulo kooxda Chelsea balse waxa uu qiray in uu ku qanacsan yahay kursiga kaydka maadaama oo ay kooxdiisu guula gadhayso.
Qoraalka Chelsea ka soo baxay ayaa lagu yidhi: “John Terry iyo kooxda kubbada cagta Chelsea waxay maanta si wada jir ah ugu dhawaaqayeen in kabtankayagu uu kooxda ka bixi doono dhamaadka xili ciyaareedkan. Qof kasta oo Stamford Bridge joogaa waxa uu jecel yahay in uu muujiyo sharafta aanu u hayno John waxaanu wanaaga ugu fiican iyo nasiib wanaagsan uga rajaynaynaa mustaqbalkiisa”.
John Terry ayaa ayaa Chelsea ka soo tirsanaa inta ugu badan cimirigiisa wuxuuna waayihiisa ciyaareed ee cajiibka ahaa uu ku soo dhamaystay midabka buluuga ah ee Chelsea, laakiin ugu danbayn waxaa timid maalintii uu ka bixi lahaa Stamford Bridge si la mid ah halyayadii kale ee Blues.
John Terry ayaa Chelsea u soo saftay 713 kulan wuxuuna kulankiisii ugu horeeyay uu ciyaaray sanadkii 1998 kii tan iyo markaasna waxa uu door wayn ku soo lahaa kooxda London ka dhisan. Terry ayaa Chelsea u soo dhaliyay 66 gool wuxuuna kaalinta saddexaad kaga jiraa ciyaartoyda Chelsea abid ugu safashada badan, wuxuuna sidoo kale Terry Chelsea kabtan u soo noqday 578 kulan.
Terry ayaa Chelsea kula soo guulaystay afar koob oo horyaalka Premier leaque-ga ah, shan koob oo FA Cupka ah,Saddex koob oo Leaque Cupka ah, wuxuuna sidoo kale Chelsea la soo qaaday min hal koob oo Champions Leaque-ga iyo Europa Leaque-ga ah.